Ngawaphi awona mabhaso athandwa kakhulu kwiiNtengiso zakho oZinikwayo? | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 5, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kudala sifuna ukuyila ezinye izinyuselo okwangoku, kwaye ngelixa ukhetho kunye nezixhobo zininzi, ndiyamangaliswa kukuba kungasekho ezinye iitemplate zokusika iicokie ezinengxelo egciniweyo. Olu phando luvela I-Easypromos iyasinceda ukuba sicwangcise kwicala elilungileyo, nangona!
I-Easypromos bakhuphe iziphumo kuPhando lwabo lweBhaso lokuPhakanyiswa kweDijithali elikhanyisa kwindima yamabhaso ekuguqulweni kweendwendwe ziye kubathathi-nxaxheba kukhuthazo olufana ne-sweepstakes, ukhuphiswano lwezithombe, imibuzo okanye ukhuphiswano lwe-trivia, kunye neendidi zamabhaso ezilungileyo ekuqhubeni abathengi ukuthatha inxaxheba nokubandakanyeka.
Ezi ziphumo zingqina ntoni ukubaluleka kokucinga 'ngaphaya kwegama' xa ukhetha ibhaso. UCarles Bonfill, umseki kunye ne-CEO ye-Easypromos
Ngelixa iinkampani ezininzi zikhawulezisa ukubonelela ngentengiso yazo ezinophawu okanye igajethi yetekhnoloji yamva nje, iziphumo zophando zibonisa ukuba oku akusoloko kubhejwa ngokukhuselekileyo. Ukuzonwabisa ibiyinto ebaluleke kakhulu ekuthathweni kwesigqibo ekuqhubeni inxaxheba kutyelelo lwedijithali, oko kuthetha ukuba akufuneki kube nzima ukuyifumana kumkhuthazi okanye ekusebenziseni, ngelixa Ixabiso lomvuzo ibekwe kwindawo ephantsi ngokubaluleka. Kuphela sisixhenxe seepesenti sabathengi abathi isigqebhezana siza kubarhwebesha ukuba bathathe inxaxheba kunyuso lwedijithali.
Iziphumo eziphambili kuPhando
Amabhaso abalulekile - Akumangalisi ukuba i-48% yabathengi iqaphele ukuba ibhaso yeyona nto ibalulekileyo ekuthatheni inxaxheba; nge-45% isitsho ukuba sesona sigqibo sithatha isigqibo
Iimpawu azibalulekanga kangako -I-82% yabaphenduliyo bathi ukuthanda ibhaso kubaluleke kakhulu kunophawu lwebhaso, nge-18% kuphela echaza ukuba uphawu luya kuqhuba ukuthatha inxaxheba.
Amava ekwabelwana ngawo aphumelele -25% baqaphele ukuba baya kuba nakho ukubandakanyeka ekunyuselweni amabhaso amabhaso anokwabelwana ngawo nabanye, nge-29% yabaphenduli besithi amabhaso abo abawathandayo amatikiti kunye namava afana nohambo okanye isidlo sangokuhlwa.
Izixhobo zetekhnoloji kunye namanye "amabhaso wam enzelwe mna" nawo athandwa kakhulu -Izixhobo zeTekhnoloji nazo beziphezulu kuluhlu kunye ne-17% yabathengi abadwelisa njengezona zinyanzelisayo, kunye namanye amabhaso anjengempilo kunye nobuhle be-11% yabaphenduliyo ukuba bathathe inxaxheba kunyuselo.
I-Easypromos yinkokeli kunyuselo lweendaba zosasazo ezinikezela ngenkonzo yokuzenzela, indawo ekulula ukuyisebenzisa yokwenza nokulawula amaphulo edijithali ngaphandle komthungo kuyo nayiphi na inethiwekhi yemidiya yoluntu okanye isixhobo. Yaziswa ngo-2010, i-Easypromos inikwe amandla kwimikhankaso yedijithali exhasa ukhuphiswano, i-sweepstake, imibuzo, uphando, nokunye okuninzi ngezisombululo ezilula ezinokwabiwa ngokulula ngaphezulu kwama-250,000 anyuselo kwihlabathi liphela. Abaxhasi bathatha amazwe angama-50, benonyuselo oluqhutywa ngeelwimi ezingama-24.
Ukubhengezwa: Sisebenzisa eyethu uqhagamshelwano kule posi.
tags: Ukunyuselwa kwabathengisifumanisiamabhaso athandwayoamabhaso okwenyusaamabhaso okunyusauphando lwentengisoUkunyuswa